ကုမ္ပဏီခရီး | Solid Products Co. , Ltd.
ရောင်စုံ Webbing မှဆိုးဆေး
Solid Products Co. သည်စက်မှုအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းသည်မြင့်မားသောဇွဲကြိုးမျှင်ဖြစ်သည် ၎င်းကိုရက်လုပ်ပြီးဆေးပါ၊ ဆေးကြောပါ၊ထိုကဲ့သို့သောကုန်တင်ထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်, ဒြပ်ရုတ်သိမ်းရေးလောက်လွှဲထုတ်ကုန်များ, ကားဆွဲကြိုးနှင့်တူသောကဲ့သို့သောအထည်အလိပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ဖြစ်ရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့လုပ်မြင့်မားသော tenacity ဝက်ဘ် စက်မှုနှင့်စားသုံးသူစျေးကွက်အတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပြည်တွင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုတ်သိမ်းခြင်းလောက်လွှဲထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသည် ဆောက်လုပ်ရေး, တူးဖော်ခြင်း, ပိုက်လိုင်း စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စသည်တို့ကိုပိုက်ဆန်ခါကြိုးများကိုအသုံးပြုကြသည် Off-Road ပြန်လည်ထူထောင်ရေး.
Anji ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Hangzhou မြို့နှင့် ၁ နာရီသာဝေးပါသည်။
အရည်အသွေး, အရည်အသွေး, အရည်အသွေး!
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် အလိုအလျောက်စက်ခေတ်သစ်နှင့်အရည်အသွေး - တသမတ်တည်းထုတ်လုပ်မှုသည်။ တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူအရည်အသွေးအာမခံ နှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု system ကိုအကောင်အထည်ဖော်, ကျနော်တို့စျေးကွက်မှသာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုဂရုစိုက်သည် အရောင်စွဲစေ, အပ်ချုပ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်, ထိုထုပ်ပိုးခြင်း, အ ပေးပို့အချိန်, ...
၎င်းတို့အားလုံးအထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ Breaking Testing ကိုဂရုစိုက်သည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်စက်ရုံ တန်ချိန် ၁၅၀ အင်အားကိုချိုးဖောက် ကျွန်တော်တို့ကိုသေချာစေသည် ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်.
သင့်အားသင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် အခမဲ့နမူနာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုအတည်ပြုချက်များအတွက်။